Nke a bụ Galaxy Fit, mgbaaka ọhụụ Samsung Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ Galaxy Fit, mgbaaka ọrụ Samsung ọhụrụ
Jose Rubio | | Ngwaọrụ yi, Ngwa
Samsung ejiriwo uru nke Omume a akwughi, n'ihi na na mgbakwunye na-eweta ekwentị ọhụrụ ha, bụ ndị Galaxy S10 na Fold Galaxy, akara Korea amalitela ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ, makwaara dị ka ihe ndi ozo. Yana hotara na mbụ smartphone, na ya ọhụrụ smartwatch, na Galaxy nọ n'ọrụ, gosipụtara ọhụrụ wristbands Galaxy Fit na Galaxy Fit e.
Ọ bụ ezie na anyị na Galaxy nọ n'ọrụ anyị nwere ntakịrị mmiri tupu ihe omume ahụ, inwe ike ịmepụta atụmanya nke ihe anyị ga-ahụ taa na Unpacked, n'ihe banyere Galaxy Fit ọ dị iche, ebe ọ bụ maka ngwaọrụ nke ọ nweghị onye tụrụ anya ya, na ihe na-abịa dochie Gear nso, na-ejikọta maka oge niile wearables na Galaxy nso.
1 Nkọwa nke Galaxy Fit
2 Ihe ngosi akara ngosi nke Galaxy Fit
3 Mgbakwunye na nso nso nke Galaxy
4 Nye ọnụahịa na nnweta
Nkọwa nke Galaxy Fit
N'ime ụdị ọhụụ nke Galaxy Fit, anyị na-ahụ, n'otu ụzọ ahụ na-eme na Samsung Galaxy S10 ọhụrụ, otu nomenclature ohuru nke na akowa uzo di mfe nke ngwaahịa. Nke ahụ bụ, na mgbakwunye na nke Galaxy Fit, Galaxy Kwesịrị ekwesị e.
Ihe dị iche n’agbata nsụgharị abụọ ahụ dinara na ihuenyoịbụ na agba na Galaxy Fit na nwa na oji na Galaxy Fit e. Anyị na-achọtakwa, dị ka ọdịiche ọhụụ doro anya, a ụdị agba dị iche iche n'etiti nsụgharị abụọ ahụ nke mgbaaka Samsung ohuru, inwe ike ịhọrọ n'etiti nwa na ọlaọcha na ụdị ọkọlọtọ, ebe nhọrọ gbasaa nwa, ọcha na odo na ụdị dị ọnụ ala, na-enye ya ọdịdị egwuregwu na ọdịdị nkịtị.
Mana o doro anya na site na ebe ha ga-egbutu ya iji nwee ike ịnye ngwaahịa na ọnụahịa dị ala. Na mgbakwunye na ihuenyo ojii na ọcha nke Galaxy Fit e, dị ka anyị ga-ahụ na tebụl ntụnyere dị n'okpuru, anyị na-ahụ obere pixel density. Nke a ma eleghị anya na obere ngebichi dị mkpa dị ka ọ nwere ike inwe na ama, mana ọ bụ nkọwa iji banye na ya.
N'otu aka ahụ bụ ihe dị iche na RAM, ịbụ onye okpukpu anọ na Galaxy Fit ma e jiri ya tụnyere ihe nlereanya e, na batrị na-enwe nbelata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% na nke a kachasị ọhụrụ, na-abịarute ruo otu izu n'ogologo n'etiti ibu na ibu na kacha mma.
Ihe ngosi akara ngosi nke Galaxy Fit
Galaxy Kwesịrị ekwesị e
Agba Nwa-ọla-ọcha Nwa-acha ọcha-edo edo
Ihuenyo 0.95 "Agba zuru AMOLED 0.74 "PMOLED
Mkpebi 120 x 240 - 282 ppi 64 x 128 - 193 ppi
Nhazi MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHZ MCU Cortex M0 96MHz
Size X x 18.3 44.6 11.2 mm X x 16.0 40.2 10.9 mm
Ibu ibu na eriri 24 grams 15 grams
Nchekwa 32MB ROM 4MB ROM
Batrị 120 mAh 70 mAh
Sensọ Pulse + Accelerometer + Gyroscope Pulse + Accelerometer
Carga NFC ikuku Pogo
Nguzogide 5ATM MIL STD 810G 5ATM MIL STD 810G
Mgbakwunye na nso nso nke Galaxy
N'adịghị ka Samsung Gear Fit na Gear Fit 2, ndị Galaxy Fit nwere ihuenyo dị larịị, na-ahapụ ihu na curved ihuenyo nke ndị bu ya ụzọ. Na mmebe a merie na mfe ọ na-enye ohere nchekwa ego nke onye ọrụ njedebe ga-enwe obi abụọ adịghị ya ịnabata, n'agbanyeghị ụdị nke ha họọrọ.
Site na onye mgba ohuru maka ọla aka nke ọla aka, Xiaomi Mi Band, Samsung nwere olile anya ịbawanye niche ahịa ya, na-enye ngwaahịa nke aha ya bụ nkwa nke ịdị mma, dị ka ọ dị na nke ọzọ nke ngwaahịa Galaxy, maka ndị ọrụ ahụ enweghị ike imefu nnukwu ego maka ịzụta ihe eji ejiji, ma ọ bụ ndị na-achọ maka usoro Atụmatụ dị mfe karịa smartwatch na-enye, dị ka nke ọhụrụ Galaxy nọ n'ọrụ.
Ọ bụ ezie na enweghị obi abụọ, Galaxy Fit bụ lekwasịrị anya na nlekota nyocha n'oge ọzụzụ egwuregwu, malite na ndebanye nke mmega ọ bụla oge ọ bụla anyị malitere ime ya, na-enweghị ịtọ ma ọ bụ hazie oke ọ bụla na mgbaaka anyị. N'ezie, ọ nwekwara ike nyochaa ụra anyị na obi anyị, na-enye anyị ozi gbasara ndị a, yanakwa ndụmọdụ iji melite ahụike anyị.
Ọ bụ ezie na Samsung akwadobeghị ọnụahịa gọọmentị, ọnụahịa ya ga-adị n'etiti ihe dị ka € 30 nke Xiaomi Mi Band na-akwụ ụgwọ, onye isi ya na-asọmpi, na ihe karịrị € 130 nke Gear Fit 2 dị ugbu a. Ekwenyebeghị ụbọchị ịhapụ., ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya iche na ọ ga-adị site na March 8 na-esote, dị ka ọ ga-eme na smartwatch ọhụrụ nke ezinụlọ Galaxy, Galaxy Active.
Bụrụ nke ahụ, n'oge na-adịghị anya ezinụlọ Galaxy ga-eto eto iji dozie mkpa onye ọrụ ọ bụla, anyị enweghịkwa obi abụọ ọ bụla na Galaxy Fit ọhụrụ, yana ụdị ya dị mfe, Galaxy Fit e, ga-abụ ụdị ndị kachasị ewu ewu na ebe niile n'etiti ndị na-azụ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Nke a bụ Galaxy Fit, mgbaaka ọrụ Samsung ọhụrụ
Nkọwa n'etiti Galaxy S10, S10 + na S10e
Kpoo igwe isi ohuru nke Samsung Galaxy Buds Bluetooth